El Fadri, akara nke Castellón | Njem zuru oke
Nke a mgbịrịgba elu Narị afọ nke XNUMX, emi odude ke ufọt Katidral na Abbey House, ọkwa awa nke obodo na ihe omume ndi ozo, gbanwere dika nke ya akara.
Emi odude ke Plaza Mayor, ụlọ elu ochie a dị mita 58 dị elu na octagonal, n'adịghị ka ụlọ elu mgbịrịgba ndị ọzọ, dị iche na Katidral. Ahụ anọ nke ụlọ ahụ kwekọrọ n'otu ọnụ ụlọ elekere, ụlọ mkpọrọ, ụlọ mgbịrịgba na ime mgbịrịgba ahụ, nke nwere ntụgharị asatọ na atọ edozi nke na-egosi ebe na elekere. Elekere chere Plaza Mayor ihu, mana ọ bụ onye nọchiri nke mbụ ahụ, site n'afọ 1600, nke chere Calle Colón ugbu a ihu.
Otu steepụ dị okirikiri na-eduga anyị na nke ọ bụla n'ime ala ndị a, nke malitere iwu na 1440 ma wuchaa ya na 1593. N'ịbụ onye ndị uwe ojii asatọ na-eche nche, ụlọ elu ahụ na-ejedebe na paipe nke gbara mbara ala ahụ gburugburu ma nwee pilasters Tuscan nke ejiri taịl na-acha anụnụ anụnụ kpuchie. Ejiri ọlaọcha chọọ ya mma Valencia na Torres de Castellón, ndị ọpụrụiche na-egosi myirịta dị n'etiti ụlọ mgbịrịgba a na nke Iglesia Arciprestal de Sant Mateu na Iglesia Parroquial del Salvador de Burriana.
Ministri nke Omenala ga-etinye nde 20 ọzọ iji mepụta ụlọ ebe a na-akụzi nkuzi ma kwado ihe nchọta dị iche iche. Ihe jupụtara na nkume ahụ bụ Santa María, site na 1410
Iwu maka na ndị niile bịara ileta Castellon, ọrụ mweghachi ndị ahụ ekpughewo ụfọdụ ọchịchọ ịmata ihe mere ihe nketa nke Towerlọ Elu ahụ bara uru; iji maa atụ, kalenda elekere na nke ziri ezi nke anyanwụ na ọnwa, dị na windo nke ụlọ mgbịrịgba ahụ: ọ bụ mpempe dị oke ụkọ, pụrụ iche na Valencian Community, ma mejupụta ígwè nke ejikọtara na nkume nwere obere oghere site nke ọ banyere n’anyanwụ nke ọnwa na ọnwa.
Ihe ndi ozo ekpughere bu polychrome nke uwe agha nke obodo na ufodu ihe omuma nke na-egosi onye agha nke agha nke iri na asaa nke nwere nku nku, uwe na florin, na-ejide onye iro di obere n'aka ya.
Na 1604 Ikpeazụ Nwuwu e wuru; Ọ na-ebu nọmba 191, atọ dị ala karịa Micalet nke Valencia.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Njem zuru oke » El Fadri, akara nke Castellón
Katidral Westminster, otu n'ime ihe nzuzo nzuzo London